Lolli Bilxiginnaafi TPLf gidduutti adeemsifamaa jiru, lola Sirna Leexaafi Federaalizimii gidduutti – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsLolli Bilxiginnaafi TPLf gidduutti adeemsifamaa jiru, lola Sirna Leexaafi Federaalizimii gidduutti
Lolli Bilxiginnaafi TPLf gidduutti adeemsifamaa jiru, lola Sirna Leexaafi Federaalizimii gidduutti adeemsifamaa jirudha waan ta’eef, Oromoon ala dhaggeeffachuutti qe’esaa dagachuu hin qabu jechuun hayyoonni biyya keessaa OMN-tti himan.
Barsiisaa Saayinsii Siyaasaa Yuunvarsiitii Diillaa maqaan isaa akka kaafamu hin barbaanne tokko akka jedhutti, “Lolli yeroo ammaa labsamee jiru kun lola qeenxee yookaan lola TPLF fi Bilxiginnaa fakkaatus, akkasumas ammoo lolichi lola qaamota cunqursitootaa lama gidduutti adeemaa jiru ta’us, wanti saba keenya jalaa dhokachuu hin qabne lolli kun lola Humni leexxaa (unitary) yookaan Nafxenyaan humna Federaalizimii irratti taasisaa jirudha.” jechuun lolli labsame kun kaayyoon isaa irra keessaan TPLF diina waggaa 27 guutuuf saboota cunqursaa ture cabsuu fakkeessuudhaan, ambaa Sirna Federaalizimii sabummaa kan Tigiraay hambifatte sana balleessuufudha jechuun OMN-tti hime.
Yuunvarsiitii Ambootti barsiisaa Seeraa namni ta’es dhimmicharratti yaada laateen Lolli kun heera Biyya keenyaa kan faallessudha jechuun, “lolli keessoo biyyaatti godhamu kamuu Poolisii naannoofi Federaalaarra darbee, Raayyaa Ittisa biyyaa hirmaachisuuf adeemsa hordofuu qabuutu ture. Raayyaan Ittisa biyyaa kan biyyaati malee kan Paartii hin turre. Amma garuu, lolli paartii Bilxiginnaafi TPLF kun Raayyaa silaa biyyaaf dhaabbatu ofitti dabaluun lammii biyyas lolchiiduun dogoggora seeraati.” jechuun, lolichi lola mirga ofiin of bulchuu sabootaa balleessuuf labsamedhas jedhan.
Hayyoonni kun cuunfaa yaada isaanii irratti, Qeerroon Oromoos ta’u, uummatni bal’aa Oromiyaa hundi shurufkaa qilleensa lolaa kanaan burjaajja’uu dhiisee qe’ee isaa seeraan hordofuu qaba kan jedhan, qabsoo walitti fufaa sirna farra sabboonummaafi Oromummaa ta’e Bilxiginnaa irratti taasisaa jiru kanas itti fufuu qaba. Labsii lagannaa Gabaa marsaa 5ffaa kan haalli gaariitiin jalqabame kana jabeessuun, sirna farra Federaalizimii ta’e kanatti xumura gochuutu barbaachisas jedhaniiru.
Lolli Paartii Bilxiginnaan Naannoo Tigiraay irratti guyyaa tokko dura labse, haala akkamiirra akka jiruufi taateewwan naannoo sana ilaalchisuun akka BBC Afaan Oromoo repoortera miidiyichaa Naannoo Tigiraay keessa jiru wabeeffatee gabaasetti, sochiin magaalaa Maqalee keessa jiru, sochii lafooti. Mootummaan naannichaa labsii yeroo muddamaa labsuun, sochii Konkolaataa fi Xiyyaaraa naannicha keessatti akka hin taasifame dhorgee turus, guyyaa har’aa sochiin Jeettii qilleensarratti mullateera.
Pireezidantiin Mootummaa Naannoo Amaaraa Obbo Tamasgeen Xurunee ibsa miidiyaaleef laataniin lola bakka Soroqaafi Qaraaqir jedhamutti eegalameen Mootummaan Federaalaa injifannoo argatee jira jedhan.
Haa ta’u malee, Pireezidantiin Mootummaa Naannoo Tigiraay Dabratsiyoon Gabramikaa’el (PhD) ibsa TV Tigiraayiif laataniin, lolli kallattii daangaa Tigiraay fi Amaaraatiin jiraachuu mirkaneessanii, injifannoon argama jiru kan Naannoo Tigiraay jedhanii jiru.
Meeshaa waraanaa biyyattii kan Ajaja Kaabaa harka ture hunda humni Nageenya Mootummaa Naannoo Tigiraayii booji’uu himaniiru.
Dhimma kanarrattis Dr. Dabiratsion “Meeshaalee waraanaa guutuu kan duraan qabnurratti, amma kan dabalata arganeerra.” jedhan. Mootummaan naannoo Tigiraay kallattiilee naannicha daangessan hundaan humna ofii qubsiisuusaas himaniiru. Mootummaan Federaalaa Misoomaalee bu’uraa, Teelee, Ibsaafi Bishaan naannicharraa kutee jiraachuus BBC Afaan Tigirinyaa gabaaseera.
Innisan Lash jedhee dunuunfatee sirnaan rafaa jira”Cundhuuraan immoo akkuma ija banatetti ciisaa jira.